Tsy miaro ny laza laza anao ny kabary maimaim-poana | Martech Zone
Zoma Janoary 27, 2012 Zoma Janoary 27, 2012 Douglas Karr
Sam Montgomery dia mpamaky Martech Zone ary nifandray tamiko momba ny tantaran'ny talenta baolina kitra tanora iray antsoina hoe Yuri Wright. I Yuri dia noraisim-panjakan'ny State Michigan… mandra-pahatongan'ny sasany mamaky ny bitsika. The ny bitsika dia aseho amin'ny Chat Sports ary tsy azo antoka amin'ny asa (NSFW)… fantaro fotsiny fa maloto izy ireo.
Yuri Wright, ilay kintana 4 kintana CB avy any New Jersey, dia nanjary nankany Michigan tamin'ny kilasy 2012. Tany am-piandohan'ity volana ity, ny mpiasa mpanazatra ao Michigan dia nijery lalina ny vinavina rehefa nandefa ny bitsika nataon'ny mpianatra tao amin'ny kaonty Twitter izay navoakan'i Yuri tao amin'ny kaontiny Twitter izay tsy ekena ara-pirazanana sy ara-nofo.
Tena niresaka tamin'ny oniversite maro momba izany aho ary nilaza tamin'ny mpianatra izany ny zava-drehetra ny firaketana an-tserasera amin'ny media sosialy androany dia zavatra iray izay hisy fiatraikany amin'ny vinan'asan'izy ireo eny an-dàlana. Gaga ny sasany, maro no mihevitra fa tsy rariny… fa ny tena izy dia izay Ny mpikarama an'I Michigan dia taratry ny oniversite misy azy ireo mivantana.
Nisafidy ny hetsika mety mifototra amin'ny toe-javatra i Michigan. Mino aho fa nianatra lesona sarotra ihany koa Andriamatoa Wright. Azoko antoka fa niloa-bava fotsiny ianao mba hanome isa vitsivitsy tamin'ireo mpanaraka azy ary hihomehy vitsivitsy. Raha mpanao hatsikana izy dia tsy maninona… fa satria mpandray anjerimanontolo manana fahitana ambony izy dia izao no zava-nitranga.
Ny hetsika rehetra ataonao amin'ny Internet dia misy vokany. Izany no mahatonga ny tena tsy misy zavatra toy izany mangarahara… Mihoatra izany opaqueness. Tsy mandeha amin'ny fomba mahatafintohina olona amin'ny Internet aho, fa na dia ny mpanaraka ahy aza indraindray dia tsy miraharaha ny fahatsapako vazivazy.
Rehefa bitsika ny zavatra manaitra ahy dia tsy mampidi-doza mpanara-dia fotsiny aho, fa manao vivery ny aina ireo mpanohana ny bilaogiko sy ireo mpanjifa avy amin'ny maso ivoho miditra. Tsy misy fomba ahafahako mangarahara tanteraka! Tiako ny vazivazy tsy tia loko… arakaraka ny tsy fahaizan'ny politika no vao mihomehy aho matetika. Ny hevitro fotsiny, fa ny zava-misy fa tsy dia mihontsina loatra ny olona amin'izao fotoana izao - mahatsiravina - indrindra fa milalao an-tserasera ny fiainantsika.
Azoko atao ny miaina miaraka amin'ny famoizana mpanaraka ahy, ary angamba mpamaky, saingy mbola nahasosotra ahy ihany izany. Nahasorena ahy izany fa misy olona any izay noheveriko ho olona tsy izy aho. Saingy tsy maintsy apetrako ao aoriako izany ary handroso aho. Tsy tonga lafatra aho fa ho solafaka tsindraindray. Ary… misy olona tsy te ho tia ahy tsotra izao. Zava-misy tsotra fotsiny izany.
Fa izaho kosa tsara vintana… Tsy manomboka ny asako. Tsy mpiasan'ny olona na mpiasan'iza aho. Tsy azoko an-tsaina hoe ho aiza aho amin'ny fiainana raha misy sary Facebook, Twitter - na ratsy kokoa - Youtube fony aho zatovo. Izaho dia tanteraka tsy voafehy. Mety hiasa mafy any ho any angamba aho!
Mendrika hanana fotoana faharoa ve izy? Eny… isika rehetra dia manao. Soa ihany fa nahazo iray izy rehefa naka azy i CU:
Fahadisoana lehibe no nataoko, ”hoy i Wright. “Tena nianatra lesona sarobidy aho, ary mampanantena zavatra tsy hisy toy izany intsony. Izay rehetra mahalala ahy dia mahalala fa tsy ny tena toetrako na ny tena toetrako. Tsy hipetraka eto aho ary hanandrana sy hanao fialantsiny amin'izay nataoko. Ho lasa lehilahy fotsiny aho ary hilaza fa diso ary nianatra avy amin'izany aho.
Iza no mahalala… indray andro any mety mila fotoana hafa koa ianao. Andao tsy hanao zavatra adala any, ry havana! Mijery ny olona… ary maro no tsy mahatsikaiky.
Tags: baolina kitrampilalao baolina kitraMichiganTwitteryuri wright